Ihe ị ga-eme na Seville | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Getaways, Sevilla
Dabere na ndị nkwusa a ma ama nke ndị nduzi nleta, Lonely Planet, a ghọtara Seville dị ka obodo kachasị mma n'ụwa ka ọ gaa na 2018. Ya akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị ọdịbendị, ya gastronomy na omume ọma nke ndị ya na-eme ka ọ dị mkpa na-aga ileta n'oge njem Spain ma ọ bụ a pụọ.
1 Lọ ihe nkiri nke Ọma Arts
2 ụlọ elu nke Gold
4 Katidral nke Sevilla
5 Royal Alcazar nke Seville
Ọ bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa na Seville na ụlọ ngosi ihe osise nke abụọ na Spain mgbe Prado Museum, yana nchịkọta ihe osise bara uru sitere na ụlọ akwụkwọ Baroque (Zurbarán, Murillo na Valdés Leal), yana ngosipụta akpọrọ akpọrọ nke ukwuu. E hiwere ya na 1835, na-arụ ọrụ site na ụlọ obibi ndị mọnk na ebe obibi ndị mọnk nke gọọmentị na-emesapụ aka nke Mendizábal napụrụ ya. Ọ dị na square nke otu aha ahụ, bi na Old Convent nke La Merced Calzada tọrọ ntọala na ala nke Fernando III nyere ya mgbe o merisịrị Seville.
Na ụlọ ụka nke Museum of Fine Arts na Seville, anyị hụrụ otu n'ime Christs kachasị dị egwu na izu ụka dị nsọ na Seville. Na Sọnde ọ na-emepe, ya mere, ọ bụ ụbọchị dị mma iji gaa ahịa ahịa na Plaza del Museo n'onwe ya.
Ọ bụrụ n'ịga ije na Guadalquivir, ị ga-erute Torre del Oro a ma ama. Aha ya sitere n'echiche ọla edo nke taịl nile kpuchiri ya na narị afọ nke XNUMX. N'ịdị elu ya nke mita 36, ​​o mechiri ụzọ ahụ gaa Arenal site na ngalaba mgbidi nke jikọtara ya na Torre de la Plata, nke bụ akụkụ nke mgbidi Seville nke chebere Alcázar.
Otu n'ime ebe kacha maa atụ na Seville bụ María Luisa Park. Ọ na - enweta aha ya site na ọdụ nwanyị nke ọdụdụ Fernando VII, onye bi n'isi obodo Seville ọtụtụ oge ndụ ya. Di ya, Duke nke Montpensier, ya na ya biri na Obí San Telmo ma mgbe ọ nwụrụ, Infanta nyere ogige ụlọ ahụ obodo ahụ. E hiwere ya dị ka Ogige Ọha na Eprel 18, 1914 na aha Infanta María Luisa Fernanda Urban Park.
Mgbe ndozigharị nke onye ọrụ France bụ Jean-Claude Nicolas Fourestier rụrụ, onye na-elekọta ọhịa Boulogne na Paris, eọ María Luisa Park nwetara mmetụta ịhụnanya nke sitere n'ubi nke Generalife, Alhambra na Alcázares nke Seville.
Seville bụ katidral Gothic buru ibu na ụwa yana ụlọ nsọ Ndị Kraịst nke atọ mgbe Saint Peter nọ Rome na Saint Paul na London. E wuru ya na foduru nke ụlọ alakụba ochie mgbe o merisịrị obodo Ferdinand III nke Castile na 1248 ma mee ya n'ọtụtụ ụzọ karịa afọ 500, na-ebute ngwakọta nke ụdị ụlọ dị iche iche na-enye ya ọmarịcha ịma mma.
Katidral nke Seville nwere 5 naves na ụlọ ụka iri abụọ na ise, nke nwere ọrụ nke ụfọdụ ndị na-ese Spanish a ma ama.
The Real Alcázar nke Seville e nyere iwu ka a wuru dị ka obí-ewusiri ike site Abd Al Raman III n'oge dị elu Middle Ages. Ka ọ dị ugbu a, a ga-eji ya dịka ebe obibi, ọkachasị ndị otu ụlọ nke Royal Royal. Ihe owuwu ihe owuwu a gbara gburugburu ya na ihe ịchọ mma ya maka ụdị ụlọ dị iche iche dịka Islam, Mudejar, Gothic, Renaissance na Baroque. Echefula ihe di mkpa dika ubi ya mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ihe ị ga-eme na Seville